कस्ता ब्यक्तिका लागी यौनवर्धक औषधि भियाग्राको प्रयोग ? यसको प्रयोग कति खतरनाक छ ? – Kalika News
कस्ता ब्यक्तिका लागी यौनवर्धक औषधि भियाग्राको प्रयोग ? यसको प्रयोग कति खतरनाक छ ?
२० मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:३३ , मा प्रकाशीत
पछिल्लने समय मानिसहरुमा यौन शक्ति बढकाउनको लागी बिभिन्न खालको औषधीहरु समेत खाने गरेको पाईएको छ । मानिसहरु बिना चिकित्सकोे सल्लाह बीना नै भियाग्रा औषधीहरु खाने गर्दछन् । तर खास गरी युवाहरुले आफ्नो पुरुषत्व बढाउन र लामो समयसम्म यौनआनन्द लिन भियाग्रा खाने गरेको हुन्छ । यती मात्र नभई आफ्नो यौनसाथीको सामु शरम नहोस् भनेर भियाग्राको प्रयोग लपारवाही रुपमा गर्दे आएको भेटिन्छ । यस्तो कीसीमको लापार वाही तरिकाले यौन शक्ति बढाउने औषाधीले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
कस्ता ब्यक्तिको लागी भियाग्राको प्रयोग ?
असर धेरै भयो भने ‘के गर्ने ?
बाँकेमा कुष्ठरोगको रोकथाम चुनौतीपूर्ण